Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Maalinta LGBTQ+ Maalinta Dalxiiska Style Talyaani
dhaqanka • Xuquuqda Aadanaha • Italy War Deg Deg Ah • LGBTQ • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maalinta Dalxiiska LGBTQ+ Adduunka
Ogosto 10 -keeda waxay noqon doontaa Maalinta Dalxiiska LGBTQ+ Adduunka, oo laga aasaasay waddammada Laatiin Ameerika oo laga qaatay heer caalami.
Talyaanigu wuxuu ballantan u imanayaa Maalinta LGBTQ+ Maalinta Dalxiiska Adduunka markii ugu horraysay isaga iyo hay'ado kale.
Si wada jir ah u wada saxeexaan Xeerka Kala -duwanaanshaha & Ka -mid -noqoshada waa Wakaaladda Dalxiiska Qaranka ee ENIT, Ururka Dalxiiska AITGL Talyaani Gay & Lesbian, iyo Kooxda Sonders & Beach.
Borotokoolka cusub wuxuu u arkaa Talyaaniga, sida meelaha waaweyn ee caalamiga ah, inay qaataan siyaasadaha Maareynta Kala -duwanaanta si loogu diyaariyo ballanka muhiimka ah ee 2022.
Nidaamkan ayaa la bilaabay iyada oo la eegayo magacaabista “IGLTA 2022 Convention in Milan” Italy. Madaxweynaha IGLTA Alessio Virgili ayaa yidhi, “IGLTA Shirweynaha 2022 ee Milano wuxuu u iftiimin doonaa sida iftiinka Talyaaniga. ”
Dalxiiska LGBTQ+ ee Talyaaniga ayaa ku wajahan xilli cusub. Xafiisyada caalamiga ah ee ENIT ayaa gacan ka geysanaya cilmi -baarista waaxda iyaga oo taageero ka helaya Guddiga Sayniska ee AITGL, kaas oo ay ka qaybgalayaashu hormuudka ka yihiin warshadaha dalxiiska Talyaaniga iyo hay'adaha.
Madaxweyne Virgili wuxuu yiri: “Dalxiiska LGTBQ+ wuxuu soo saaraa 2.7 bilyan oo yuuro gudaha Talyaaniga. Waxaan ku faanayaa inaan gaadhay heerkan muhiimka ah ka dib ballanqaadkayagii dheeraa ee ku aaddanaa kobcinta suuqan annaga oo taageero ka helaya hay’ado iyo ganacsato badan. ”
"IGLTA Virgili wuxuu intaa ku daray, "Heshiiska wuxuu durba la kulmayaa daqiiqad aad u wanaagsan, oo saamaynta dhaqaale ee dareenkani abuuri karo waxay hubaal u noqon doontaa koboc dheeri ah oo dalkeenna ah, iyadoo soo saareysa 2 milyan oo doollar oo keliya adeegyada kaabayaasha ah ee Milan martigelinaya dhacdadan."
Dalxiiska LGBTQ+ waa waax adkeysi badan leh oo horumarisa danaha aadka u gaarka ah ee kaxeeya waaxda dalxiiska. Talyaanigu wuxuu diiwaangeliyaa 10 boqolkiiba wadarta guud ee LGBTQ+ socdaalayaasha adduunka oo fursado siinaya shirkadaha doonaya inay kala duwanaadaan oo ay maalgashadaan qaybtan muhiimka ah ee u qalanta Talyaaniga inay tahay waddan soo dhaweyn leh.
Badbaadada, oo had iyo jeer muhiim u ah dalxiisayaasha LGBTQ +, ayaa sannadkan adduunka oo dhan looga dabbaaldegayaa halku -dhigga ah "Khibradaha nabdoon ee socdaalayaasha LGBTQ, safarka loogu jiro dalxiiska loo dhan yahay."
“Heerka guusha ee hadda jira, oo ka dhashay sanado badan oo la shaqaynayay, sidoo kale waa guul iyo faa’iido ganacsi oo u leh dhammaan hawlwadeennada Talyaaniga ee qaybta,” ayuu Virgili ku soo gabagabeeyay.
Maalinta Dalxiiska LGBTQ+ Adduunka waxaa la xusaa 10 -ka Ogosto sannad kasta waxaana ku lug leh xaflado, bayaanno iyo waxqabadyo. Maalinta ayaa sidoo kale lagu sharfayaa hormuudka safarka kuwaas oo dariiqa jeexay oo safarka ka dhigay mid nabdoon dalxiisayaasha khaniisiinta ah, kuwa isku jinsiga ah, kuwa labada jinsi ah, iyo kuwa trans wuxuuna aqoonsadaa kuwa mudnaanta siiyay ixtiraamka kala duwanaanshaha ganacsigooda dhexdiisa.
Podcast -ka Weyn ee Gay ka soo baxay Puglia wuxuu leeyahay,
Ogosto 11, 2021 markay tahay 02:25
Waa war wanaagsan! Sida laga soo xigtay sahan dhowaan laga sameeyay bulshada LGBTQ+ ee Talyaaniga Puglia waa meesha LGBTQ+ ee Talyaanigu ugu jecel yahay xagaaga. Puglia waxaa sidoo kale loo aqoonsan yahay mid caalami ah inay tahay mid ka mid ah 5 -ta Yurub ee ugu sarreeya goobaha khaniisiinta ee LGBTQ+ socotada. Taas oo ka dhigaysa Puglia meesha ugu habboon inay ahaato 10ka Ogosto 2022.